Kuverenga nhamba uye zvirevo | Kududzira - Zviratidzo Zvinoreva
Mhepo Totem Simba Mhuka
Nhamba dzekuverenga nhamba & Zvinorehwa
Tsvaga nhamba yako yekuverenga pazasi uye tinya pamufananidzo kana zita rekuverenga kuti uverenge zvese nezve zvitsvene uye zvemweya zvinoreva zvehupenyu hwako nzira, magumo, kuenderana, uye nhamba yebasa! Kana iwe usina chokwadi kana usingazive kuti nhamba dzako chii , shandisa yangu Numerology Calculator kuti uwane nyore! Zvakare, pfuurira pasi kana kudzvanya kuti udzidze zvakawanda nezve Numerology sechishandiso chekuuka .
Numerology Calculator Dhata hombe iri kunyanya yekutora manhamba uye kushandisa iwo manhamba kuita fungidziro nezveramangwana. Iyo ...
Kuverenga nhamba 1 - Nhamba 1 Hupenyu Path, kugarisana, & Destiny
Kuverenga nhamba 1: Nhamba 1 yeUpenyu Nzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva Om, mweya wekutanga wezvose. Ndiri, iye ...
Kuverenga nhamba 2 - Nhamba 2 Hupenyu Path, kuenderana, & Destiny Zvinoreva
Kuverenga nhamba 2: Nhamba yechipiri Hupenyu Hwenzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva Iwo Wemadzimai Mukadzi. Amai Vedu Vatsvene. Aya ndiwo simba reYin ...
Kuverenga nhamba 3 - Nhamba 3 Hupenyu Nzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva
Kuverenga nhamba 3: Nhamba ye3 Hupenyu Hwenzira, kuenderana, & Destiny Zvinorehwa Iyo synthesis, vana ve1 & 2, Nhamba 3 ...
Kuverenga nhamba 4 - Nhamba 4 Hupenyu Nzira, kugarisana, & Destiny Zvinoreva
Kuverenga nhamba 4: Nhamba yechina Hupenyu Hwenzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva Nemativi mana ehukuru hwakaenzana, mativi ane ...
Kuverenga nhamba 5 - Nhamba 5 Hupenyu Nzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva
Kuverenga nhamba 5: Nhamba ye5 Hupenyu Hwenzira, kugarisana, & Destiny Zvinoreva Nyika yedu yemukati neyekunze yakanyatsobatana nemaseti ...
Kuverenga nhamba 6 - Nhamba 6 Hupenyu Nzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva
Kuverenga nhamba 6: Nhamba ye6 Hupenyu Hwenzira, kugarisana, & Destiny Zvinoreva Gaia, wekupedzisira muriritiri, mupi werudo rusina mvumo. Iye, ...
Kuverenga nhamba 7 - Nhamba yechinomwe Hupenyu Path, kuenderana, & Destiny Zvinoreva
Kuverenga nhamba 7: Nhamba ye7 Hupenyu Hwenzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva Muroti wezviroto. Iye aimbova patriot wevanhu. Pfungwa ...
Numerology 8 - Nhamba 8 Hupenyu Nzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva
Kuverenga nhamba 8: Nhamba ye8 Hupenyu Hwenzira, kugarisana, & Destiny Zvinoreva Karma, kukohwa zvakadyarwa, kufungidzira kwesimba, kubudirira kwemari; ...
Kuverenga nhamba 9 - Nhamba 9 Hupenyu Path, kuenderana, & Destiny Zvinoreva
Numerology 9: Number 9's Life Path, Compatibility, & Destiny Meanings Muchirevo chenhamba, 9 inobatanidza zvachose mu ...
Kuverenga nhamba 11 - Master Number 11 Hupenyu Path, kugarisana, & Destiny Zvinoreva
Kuverenga nhamba 11: Master Number 11's Hupenyu Path, kuenderana, & Destiny Zvinorehwa Mukukosha kwemweya kwenhamba, 11 inofungidzirwa ...
Kuverenga nhamba 22 - Tenzi Nhamba 22 Hupenyu Nzira, kuenderana, & Destiny Zvinoreva
Numerology 22: Master Number 22's Life Path, Compatibility, & Destiny Meanings Nyanzvi dzezviverengero dzinotsanangura makumi maviri nemaviri saiye Nyanzvi Yakavaka zvisinganzwisisike ...
Chii chinonzi Numerology
Kubva panguva yatinodzidza kutaura, manhamba anova chikamu chedu chechokwadi chezuva nezuva, kuchikwira kumashure kwehupenyu. Une zuva rekuzvarwa, yekuchengetedzwa kwenhamba, nhamba yeimba, saizi yeshangu uye zviyero zveheti. Chinyorwa chinoramba chichienderera mberi.
Kupararira kwese kwemadhijiti chete kunotipa pfungwa yekukosha kwavo kwete kwete epanyika chete asi pamweya zvakare. Vanoona vekare uye maLightworkers emazuva ano vese vanonzwisisa kudedera kwenhamba, mhando yemitauro arithmetical iyo makiyi mune zvimwe zviratidzo, zviratidzo, mashura uye mapatani eChadenga pachezvayo.
Saka ramba uchinyemwerera!
Nheyo yekuseri kweNumerology ndeyekuti zvese zviri munyika ino zvine mhando yesimba reminwe - kusanganisira iwe! Munhoroondo yese vazivi, gurus uye vatungamiriri vakapatsanura mafingerprints aya kuti titange tichiziva kugamuchira magadzirirwo anotipa ratidziro kune zvinoreva hupenyu uye nebasa redu sevafambi vemweya.
Nenhamba chaizvo, pfungwa ndeyekuti iyo nguva yekuzvarwa kwako inogadzira zvimwe zvinokwanisika uye zvisingakwanisike, chimiro chehunhu. Paunenge iwe uchinge waziva nhema uye chena zvinyorwa, unogona kuramba uchipenda kunze kwavo, asi mitsara ndiyo pekutanga yekusimudzira zvese muhupenyu hwako kusanganisira mabasa nehukama.
Pano, tora makrayoni uye titarise zvishoma padhuze.
Nyanzvi yekuverenga nhamba haizombokuudza kuti zuva rako rekuzvarwa manhamba anonyatsokutsanangudza (heck, isu tese tinomira kuchembera pa25 handiti?
Nepo vanhu vazhinji munyika dzekuMadokero vachishandisa nzira yechinyakare yePythagorean yekufananidzira manhamba uye zvinoreva, pane dzimwe nzira dzisingateveri Pythagoras 'chero (kana vakatombonzwa nezvemurume uyu).
sagittarius anofanira kuita sagittarius
Saka isu tinofanirwa kubvumidza imwe yekufunga inoyerera kamuri mukuburitsa izvi zviratidzo nekutenda nezve maitiro avanoita hupenyu hwedu.
Numerology inoshanda sei?
Saka unotanga kupi?
Nheyo dzeNumerology hadzina kunyanya kuomarara.
Tsamba imwe neimwe muzita rako rekuzvarwa rakapihwa nhamba rinoenderana naro.
Nekuwedzera nhamba idzi nenzira dzakasiyana (zita rako rizere, mavhawero chete, makonzonendi kana nhamba dziri muzuva rako rekuzvarwa rakazara) unoguma uine chimiro chehunhu.
Zvimwe zvekufananidzira zvinokunetsa iwe, zvimwe zvinotsigira uye zvinofambisa - asi ZVESE zvinoenderana nekuti unoshandisa sei ruzivo.
comet yaHalley ichaonekwa riinhi
Vamwe vanhu vaenda kusvika pakushandura zviri pamutemo mazita avo kuti vachinje kudedera mukuvaka kwavo kweNumerological. Unofanirwa kunge uchifunga izvi, yeuka chirevo chekare nezve kungwarira zvaunoshuvira. Kuita shanduko inoshamisa zvakadaro hazvisi nyore sekungochinja 'ini' kuita 'E' (kunze kwekunge C). Iwe unofanirwa (a) kuziva zvaunoda uye (b) kugadzirira kuzvishandira.
Kunze kwekunge chimwe chinhu chinoshamisa chikaitika muchako chaicho chingatsigire shanduko yenhamba, huswa hungasave hwakasvibira iine zita idzva zvachose.
Tisati taenderera kumberi neongororo yedu unogona kufarira kuziva kuti Numerology yakashandiswa mune mamwe matunhu anoshamisa. Vamwe ma broker vanoishandisa mukufungidzira pamusika wemasheya. Vamwe vanoshandisa kuverenga manhamba kweBhaibheri mukuedza kuwana budiriro. Mutambi uyu akashandisa manhamba mana mukutumidza mazita maalbum ake uye kunyangwe munzira yaakatenga mitengo yetikiti rekushanya.
Nhamba Dzesvomhu Dzemurume kana Mukadzi?
Neyakavaka kwazvo, nhamba dzinomiririra kurongeka. Imwe yemirairo yehupenyu ndeyechikadzi - kureva murume nemukadzi. Zvinofungidzirwa kuti nhamba dzisingaenzaniswi ndedzemurume uye kunyange nhamba dzine hunhu hwechikadzi.
Pfungwa, iwe pane zvimwe zvisina kujeka pano saka funga izvi seyakajairika kutarisa uye iyo inotsvanzvadzira chete iwo chaiwo iwo ruzivo rweNumerology inopa.
Maitiro ekuwana yako manhamba ekuverenga manhamba (Hupenyu Nzira, Gumo, Kuenderana, Mweya Kurudzira, & Basa)
Nepo paine neato gadget uye gizmos yakawanda paInternet iyo inofungidzirwa ' Numerology Calculators 'isu hatizvishandise nekuti zvinoenderana nemaalgorithms isu atisina kubatanidzwa mukugadzira uye izvi zvinoreva kuti hatigone kuratidza chokwadi chawo.
Kupfuurirazve, iwo atinoziva nezvazvo akajairika uye isu tinotenda kana munhu achinge achishanda Kuvaka yavo yega Yakanaka Mweya iyo yakatarwa inofanira kuverenga.
Patakatanga kunyatsochera zvakadzika mune izvi Numerology zvinhu, isu takaburitswa kunze nekukurumidza uye nyore nyore kuwedzera yako chaiyo nhamba dzinoyera. Nekudaro, kana iwe ukaverenga nezve zvinorehwa nenhamba idzodzo chiratidzo uye mameseji emweya anova iwo akakodzera.
Izvo chaizvo zvinotora semaminetsi mashoma saka verenga edu akareruka mirairo uye uve wako wega wega Numerology Calculator !
Mune ino Pythagorean Sisitimu yeNumerology (izvo zvatinoshandisa), zita rako uye zuva rako rekuzvarwa rinomiririra yako 'Be-ing', uye nyanzvi mune ino ndima vanopfuurira kuputsa iyi ruzivo rwekutanga mune mamwe madiki-zvikamu:
Hupenyu Nzira Nhamba :
Vanoongorora manhamba vanonzwa kuti iyi nhamba inonyanya kukosha. Iyi nhamba inoenderana nezuva rawakazvarwa, kusanganisira gore. Inonzwika neako karmic mission munguva ino yehupenyu.
Destiny kana Tsananguro Nhamba:
Iyi ndiyo nhamba ine chekuita nezvinangwa, matarenda uye hutano hwepanyama / hwepamoyo. Iwe unowana ichi chimiro nekupa manhamba kune yega tsamba yezita rako rese.
Mweya Kurudzira kana Moyo Chido Nhamba:
Iyi nhamba inopa kutarisa mune zvako zvakavanzika zvishuwo uye zvinokurudzira. Tora kukosha uku nekuwedzera iwo manhamba anosanganisirwa chete mavhawero muzita rako.
Hunhu Hunhu :
Iyi nhamba ndiyo yaunoratidza kune nyika uye inowanikwa nekuwedzera makonsonendi muchikamu chega chega chezita rako, uchidzikisa zvikamu izvozvo kuita kamwe chete, uchiwedzera maviri kana matatu pamwechete zvakare, uye uchidzikisa zvakare.
Inoenderana Nhamba :
Iyi nhamba ndiko kuenzanisa kwePamoyo MaNzira ePamoyo manhamba kuitira kuti vawane mikana yehukama kubudirira uye zvinogumbura.
Nhamba Yebasa :
Nekushandisa mabhii eruzivo kubva kune ese madiki-ezvikamu zveNumerology munhu anogona kuwana zano rakanaka rebasa ravano fanirwa uye nekuziva nezve izvo yavo Mweya Chibvumirano chingave zvakare.
Numerology ine nhoroondo refu munzvimbo dziri kure seEjipitori, Israel, India neGrisi kungodoma mashoma. Mumwe muzivi anonzi St. Augustine (354-430 CE) akatiudza kuti nhamba yaive mutauro wepasirese wakabva kuna Mwari. Iye naPythagoras vaive nezvakawanda zvakafanana. Dzese dzakatsvaga kubatanidza manhamba kwete kwete chete pfungwa dzevanhu asi hukama hwezvinhu zvese.
Hakuna basa diki!
Vatsigiri veNumerology vakaonekwa munguva dzese, asi pakanga pari pakati pemakore ekuma1800 ndipo patinotanga kuona humwe hushamwari. Akin kune iyo nzira iyo Mutauro weMaruva wakakura senge chinyararire chekutaurirana system pakati pevanoda, unogona kuwana vanhu vachitaura pamusoro peti uye makuki nezve kutsvaga rudo rwechokwadi nekushandisa iwo manhamba kubva kuzita ravo kana zuva rekuzvarwa. Iwo akakosha manhamba ekuedza kwekushopera aya aive 1-10, asi kwaivewo neunyanzvi nhamba - 11, 22 uye 33 (idzo dzinoonekwa muI Ching, Tarot, Runes uye Kabbalah).
scorpio murume anodanana nemukadzi wechinyavada
sagittarius murume uye sagittarius mukadzi hukama
mapuraneti api arikudzokororazve izvozvi
chizvarwa cheAmerica mhuka totem uye zvadzinoreva